वर्षमा दुई पटक अनिवार्य मिर्गौलाको चेकजाँच गराऔँ | Mechikali Daily
वर्षमा दुई पटक अनिवार्य मिर्गौलाको चेकजाँच गराऔँ
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: १० कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०७:५१
बुटवल÷पछिल्लो समय नेपालमा मिर्गाैला रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन् । मिगौैला रोगी बढेसँगै तिनीहरूको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि नेपालमा राम्रा उत्पादन भइरहेका छन् । तीमध्येका एक हुन् मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. रजत कायस्थ । उनी गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल, बुटवलका मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ हुन् । उनी भक्तपुरको मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा पनि लामो समयसम्म काम गरेका अनुभवी चिकित्सक हुन् । उनै कायस्थसँग मेचीकालीकर्मीले नेपालमा मिर्गाैला रोगको अवस्था र उपचारको बारेमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
नेपालमा मिर्गाैला रोगको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा मिर्गाैला रोगका विरामी यति नैं छन भन्ने यकिन तथ्याङ्क त छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा भएका साना÷साना सर्भेक्षणअनुसार संसारमा जस्तै नेपालमा पनि १० प्रतिशत नेपालीलाई कुनै न कुनै मिर्गाैला रोगसम्बन्धी समस्या रहेको देखिएको छ । नेपालमा झण्डै ३० लाख मिर्गाैला रोगी रहेका छन् । त्यस्तै ४० देखि ५० हजारसम्म डायलाइसिस गनुपर्ने बिरामी छन् । उनीहरूका मृगौलाले काम नगरेर मसिनमार्फत गराइन्छ । एक पटक डाइलाइसिस गराएपछि बाचुञ्जेल गरिराख्नुपर्छ । बिरामीको अवस्था हेरेर सातामा २ देखि ३ पटकसम्म डाइलाइसिस गनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा प्रति वर्ष ३ देखि ४ हजारसम्म नयाँ मिर्गाैलाका बिरामीहरू थपिँदै गएका छन् ।
मिर्गाैलाको डाइलाइसिस भनेको के हो ?
कुनै पनि कारणले गर्दा वा अचानक वा दीर्घ रुपमा हाम्रो शरीरको मिृर्गाैलाले काम गर्न छाडेको अवस्थामा शरीरमा जम्मा हुन पुग्ने विकारजन्य पदार्थहरुलाई मेसिनको सहायताले शरीरवाट बाहिर निकाल्ने प्रक्रियालाई नै डायलाइसिस भनेर भनिन्छ । मिर्गाैलाले कुनै कारणवश काम नगरेको खण्डमा यो एक प्रकारको जीवन बचाउने उपचार प्रक्रिया हो । तर यसको माध्यमद्वारा सिधैं मिर्गाैलाको कुनै रोगको उपचार गर्न सकिँदैन । विश्व स्तरमै मिर्गाैलाले काम गर्न छाड्ने अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । अहिले सरकारले मिर्गाैलाको डाइलाइसिस निःशुल्क गर्ने सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
मुटु अस्पतालमा कति जना बिरामीले डाइलाइसिस गराउँदै आएका छन् ?
सरकारले अनुमति दिएका अस्पतालले मात्र मिर्गाैलाको डाइलाइसिस गराउन पाउँछन । हामी कहाँ दैनिक ३ सिफ्टमा (बिहान, दिउसो र बेलुका) मा विभाजन गरी बिरामीको डाइलाइसिस गर्छौँ । एक सिफ्टमा १६ जनाको गरिन्छ । दैनिक ४८ देखि ५० जना बिरामीको हामी दैनिक डाइलाइसिस गरिरहेका छौँ ।
मिर्गाैलामा समस्या आएपछि देखिने लक्षणहरू के–के हुन् ?
मिर्गाैलामा हुने समस्या सुरूको (प्रारम्भिक) चरणमा देखिँदैन । ७० प्रतिशत मिर्गाैला बिग्रिएपछि मात्र लक्षणहरू देखिन्छ । जसले गर्दा उपचारबाट निको हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ । खासमा मिर्गाैलामा खराबी आउदा देखिने लक्षण विभिन्न हुन्छन् । जस्तै वाकवाक लाग्ने, खाना खान रूचि नहुने, शरीरमा आलस्यता तथा अल्छीपना हुने, हात÷खुट्टा सुन्निने, पिसाप कम लाग्ने, रिंगटा लाग्ने र सास नन्हाउने लक्षणहरू देखिन्छन् । जुन लक्षणहरू ७० प्रतिशत मिर्गाैला बिग्रिएपछि मात्र देखिन्छन् ।
मिर्गाैला के कारणले बिग्रिन्छ ?
मिर्गाैला बिर्गाने मुख्य कारण भनेको मधुमेह र उच्च रक्तचाप हो । मधुमेह र उच्च रक्तचाप भएका बिरामीको मिर्गाैलामा खराबी आउने अथवा बिग्रिन सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यस्तै जथाभावी चिकित्सकको सल्लाह बिना प्रयोग गरिने औषधिहरू (जस्तैःपेनकिलर र निम्स) को प्रयोगले मिर्गाैलामा ठूलो असर पु¥याउँछ । त्यसैले आफूखुसी औषधि किनेर नखानुहोस् । त्यस्तै मिर्गाैलाको आफ्नै रोग र धेरै रगत बगेमा लगातार धेरै दिन पातलो दिसा तथा वान्ता भइरहेमा पनि मिर्गाैला बिग्रिन्छ । यस्तै वंशाणुगत गुणले पनि मिर्गाैला बिग्रिन सक्छ ।
खानपिनको कारणले मिर्गाैलामा खराबी आउँछ कि आउँदैन ?
दैनिक रूपमा उपभोग गर्ने खानाका कारण बिगिँ्रदैन । तर त्यही खानपिनका कारणले हुने मधुमेह, सुगर र ब्लड प्रेसरले खराबी गराउने हो । विषादी प्रयोग गरिएको तरकारीले पनि मिर्गाैला बिगार्छ ।
मिर्गाैला बिग्रिएर पछि निको हुने सम्भावना कति रहन्छ ?
मैले अगाडि नै तपाईलाई पटक–पटक भनि सकेको छु । ७० प्रतिशत मिर्गाैला बिग्रिएपछि बिरामीहरू उपचारको खोजीमा लागेको देखिन्छ । जुन भनेको डाइलाइसिस गनुपर्ने अवस्थासम्म पुगेका हुन्छ । डाइलाइसिस गर्ने भनेको मिर्गाैलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छाडेको अवस्था हो । अब आफै बुझ्नुहोस् मिर्गाैला बिग्रिएपछि निको हुने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ? भनेर ।
त्यसो भए अब सर्वसाधारणले मिर्गाैला जोगाउन के गनुप¥यो त ?
मिर्गाैला स्वच्छ राख्न सर्वप्रथम सुगर, ब्लड प्रेसरलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्नुप¥यो । सकिन्छ भने वर्षमा दुई पटक नभए कम्तीमा पनि वर्षमा एक पटक मिर्गाैलाको अनिवार्य चेकजाँच गनुप¥यो । दैनिक दुई लिटर पानी पिउने, डाक्टरको सल्लाह बिना आफूखुसी कुनै पनि औषधि नखाने, निम्स,पेनकिलर र बुर्फिन खाँदै नखाने । मिर्गाैलाको उपचार खर्चिलो छ । जाँच सस्तो छ । गौतमबुद्ध मुटु हस्पिटलमा सस्तोमामिृर्गौलाको जेकजाँच हुन्छ ।
मिर्गाैलाको चेकजाँच कहाँ–कहाँ गर्न सकिन्छ ?
मिर्गौलाको राम्रो विशेषज्ञ सेवासहितको उपचारमै कार्यरत गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पाल बुटवलमा छ । त्यस्तै सामान्य ल्याबमा पनि पिसाब र रगतको जाँच गरेर पनि मिर्गौलाको समस्या पत्ता लगाउन सकिन्छ । सामान्य ल्याबहरूमा कम शुल्कमा मुटु अस्पतालमा सबै सुविधा सहित चेकजाँच हुन्छ ।
आम नेपाली रोगले च्यापेपछि मात्र अस्पतालमा जान्छन् । अस्पताल पुगेपछि निको नहुने रोग मध्येको मिर्गाैला पनि एक रहेछ । समय–समय आफ्नो स्वास्थ्य चेकजाँच गर्न के कास्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक देख्निुहुन्छ ?
हो,तपाईले भनेजस्तो रोगले थला परेपछि मात्र उपचारमा लाग्ने आम नेपालीको बानी छ । रोग लाग्न नदिन समय–समयमा आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउने बानी छैन । हामीले रोग लागेपछि उपचारमा आउनुभन्दा पहिले नै स्वास्थ्य जाँच गराउन सर्वसाधारणलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यस्तै कुनै एक ठाउँमा गएर त्यहामा मानिसहरूको स्वास्थ्य जाँच गरी तिनिहरूमा के कस्ता समस्याहरू छन् भनेर उपचार गर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागेका छौँ । त्यसैले धेरै पटक भनिसके वर्षमा दुई पटक मानिसलाई जीवित राख्ने मिर्गाैलाको जाँच गराउनुहोस् ।
अन्त्यमा भन्नुपर्ने केही छ कि ?
म मिर्गाैला रोग विशेषज्ञ भएको नाताले सुगर र प्रेसरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेमा मिर्गाैलादेखि धेरै किसिमका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिन्छ । आफूलाई निरोगी राख्न माथिका दुई कुरा सधै मनन गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै मलाई आफ्ना कुरा सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन सहयोग गर्नुहुने तपाई अनि तपाईको मिडियालाई पनि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
प्रस्तुति ः प्रकाश आचार्य